Kulanka Golaha Shacabka oo furmay saacad ka hor oo halis ugu jira inuu fashilmo – Kalfadhi
Kulanka Golaha Shacabka oo furmay saacad ka hor oo halis ugu jira inuu fashilmo
Kulanka Golaha Shacabka ayaa laga cabsi qabaa inuu fashilmo, kadib markii uu Guddoonka Golaha Shacabka shaaciyey in, cod ay Xildhibaannadu u qaadeen kadib, dibadda looga saaro saxaafadda Kulanka Golaha. Sida uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, ku dhawaaqay, waxaa in wariyayaasha iyo qalabkooda la saaro ogolaatay 104 Xildhibaan, 42 Xildhibaanna waa diiday, iyada oo ay 20 xildhibaan ka aamuseen codeyntaas.
Buuq iyo ismari-waa’ arrintaas la xiriira ayaa hadda ka socda Xarunta Golaha, waxaana sida ay wariyayaasha Kalfadhi ee jooga halkaas sheegayaan isaga baxay Kulanka Golaha Xildhibaanno aad u fara badan, oo ka carooday in saxaafadda dibadda looga saaro goobta Kulanka Golaha Shacabka. Sida ay wararka qaar sheegayaan, waxaa gudaha Golaha Shacabka u galay ciidan boolis ah, laakiin haddana dib ayey uga soo baxeen.
Buuqaan halista gelin raba inuu dhaco Kulanka 3-aad ee Golaha, oo maanta la filayey in si adag looga doodi doono amaanka dalka, waxa uu yimid markii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal soojeediyey in dibadda loo saaro warbaahinta, “maadaama” buu yiri “laga hadlayo arrin xasaasiya oo amaanka dalka ku saabsan”.
Xildhibaannada diidan in saxaafadda dibadda loo saaro ayaa u arka in, maadaama uu Goluhu metelo shacabka, aysan sax ahayn in shacabkii la metelayey laga qarsado xogta dowladda, gaar ahaan tan maanta uu Golaha Shacabka u madalsan yahay ee amniga dalka, taas oo ah arrin ugu dambeyn shacabka saameyneysa.
Hadda, suxufiyiintu banaanka ayey joogaan, qaarna wey isaga soo tageen Xarunta Golaha, iyada oo wali la quuddareynayo in ay dhici karto in wariyayaasha loo ogolaado in ay Kulanka Golaha, haddii uu furmo, xog kala soo tagaan. Laakiin, sida ay warar hoose sheegayaan Xukuumadda iyo taageerayaasheeda Golaha ku jira ma ogola in dadku ogaadaan waxa la weydiinayo iyo waxa ay ka dhahayaan amaanka.